Global Aawaj | बुटवलकी अनिता मृत्यु प्रकरण : सुन, दाइँजो र अमेरिका ! बुटवलकी अनिता मृत्यु प्रकरण : सुन, दाइँजो र अमेरिका !
८ कार्तिक २०७८ 6:34 pm
गुल्मी । पछिल्लो समय रुपन्देहीमा एकपछि अर्को छोरी/बुहारी मृत्युका घटना सार्वजनिक भएका छन् । केहि महिना अघि सैनामैनामा एक बुहारीको अस्वभाविक मृत्यु भयो । त्यस लगत्तै तिलोत्तमाकी सीताको मृत्यु प्रकरण देशव्यापी रुपमा फैलियो । लगत्तै कञ्चनकी सीताको मृत्यु पनि अस्वभाविक भन्दै आवाज उठ्यो । अहिले रुपन्देहीकै बुटवलकी अनिता रेग्मीको मृत्युले सडक आन्दोलननै निम्ताएको छ । अमेरिका जाने तयारीमा रहेकी अनिता ‘झुण्डिएर आत्महत्या’ गरेको भन्दै उनको परिवारलाई आतमहत्या दुरुत्साहनको मुद्दा चलेको छ । यता माइती पक्षले भने आत्महत्या नभई परिवारले सुन र दाइँजोका कारण छोरीको हत्या गरिएको भन्दै न्यायको मागसहित आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।
त्यसो त प्रायः सबैका लागि अमेरिका सपनाको संसार मानिन्छ । त्यसमाथि आफ्नो श्रीमान नै उहि भएको र उनैले अमेरिका आउन बोलाए पछि कुन चाँही श्रीमतिको त्यहाँ पुग्ने सपनाले मन प्रफुल्ल नहोला र ? त्यही अमेरिका पुग्ने सपना सजाउँदै झोला झिम्टी तयार पारेर बसेकी थिइन् बुटवल- १२ ढवाहा टोलकी २७ वर्षीया अनिता रेग्मीले। असोज २३ गते उनको अमेरिका उड्ने फ्लाईट थियो । त्यसैले पनि असोज २० गते उनले घरको आफू सुत्ने कोठाका सबै सर-समान मिलाएर , दराजको सर-समान सुरक्षित पारेर उसै दिन माइतीलाई भेट्न हिड्ने तयारी गरिरहेकी थिइन्।
ज्यानसँगै यसरी छिन्यो मंगलसूत्र
मृतक अनिताको माइतीघर तिलोत्तमा- ११ को होराइजन चोकमा पर्दछ। उनका बाबु रामचन्द्र रेग्मीका अनुसार असोज २० गते विहान ११ बजेर ५८ मिनेटसम्म माइतीजनसँग अनिताले म्यासेन्जरमा कुरा गरेकी छन्। मम्मी ( सासु-आमा ) अहिले बुटवल जानु भएको छ। उहाँ आएर मलाई विदाई गर्न वित्तिकै म त्यहाँ आउँछु भनेर भनेकी छन्। त्यसपछि उनले १२ बजेर २ मिनेट जाँदा अमेरिकामा रहेका श्रीमान सुमन खनाललाई म्यासेन्जरमा-‘ बुढो मलाई माथि मम्मीले बोलाउने भएको छ ,माथि जान्छु ’ भनेर म्यासेन्जरमा लेखेको कुरा बाबु रेग्मीले आफैले देखेको बताए । उनको सुत्ने कोठा दोश्रो तल्लामा थियो,– बाबु रेग्मीले भने- ‘माथिल्लो तलामा किचनसहित सासु आमा बस्ने गरेका थिए ।’
माइती परिवारले छोरी त्यसको ‘केहिबेर पछि आउँछिन् भनेर बाटो कुरेर बसेका थिए । तर,एक्कासी त्यस दिन १ बजेर ४७ मिनेट जाँदा त्यस घरकी एउटी महिलाले अनिताकी भाउजु निर्माण भण्डारी गैरेलाई फोन गरेर भाउजु भित्र हुनुहुन्छ । ढोका लाको छ खै के भो के भन्दै फोन गर्छिन फोन तत्कालै काट्छिन् । फोन काटे पछि तत्काल कल ब्याग गरे पछि उनी कोठामा झुण्डिएको कुरा सुनाउँछन् । बाबु रेग्मी भन्छन् ‘म तत्कालै हिडेर १६ मिनेट जाँदा त्यस घरमा पुगें । ढोका खुल्लै थियो । छोरी झुण्डिएको तल भुँईमा मंगलसुक्र छिनेर यत्रतत्र छरिएको देखें । कुर्ची लगायतका सर–समान पनि भुँईमा खसेका थिए । माथि पंखामा बाँधिएको डोरी गलामा कसिएको डोरी बाँधिएको प्रकृति पनि फरक थिए । यसले गर्दा मेरी छोरीलाई कुशलता पुर्वक झुण्डाएर मारिएको हाम्रो आशंका छ ।’
विवादको बिउ सुनका गहना
बाबु रेग्मीले त्यस घरमा विवादको बिउ सुनका गहाना भएको बताउँछन् । ज्वाँइले ‘अमेरिकामा नेपाली गहनाहरुको बेग्लै महत्व हुन्छ सबै गहना लिएर आउ’ भनेपछि छोरीले लैजान लागेको र उनकी सासुले लैजानबाट रोक्न खोजेको विषयमा विवाद चर्केको उनको भनाई छ । त्यसमा उनका कान्छा छोराले आमालाई साथ दिएको पाईएको रेग्मीले बताए । ‘हामीसंग म्यासेन्जरमा कुरा गर्ने बेलासम्म छोरी एकदमै फ्रेस देखिएकी थिइन। भिडियो कलमा हामीलाई दराज बन्द गरेको,सर–समान मिलाएको कोठाको दृश्य देखाइन् । आज म मेरो रुमको मिस गरे भनिन्’– बाबु रेग्मीले भने । दुर्भाग्य त्यस रुमलाई सदाका लागि मिस गर्न पुगिन् ।’
प्लेनको टिकट र गाडी बुकिङ थियो
बाबु रेग्मीले छोरी अमेरिका उड्नेसहितका कुरा सविस्तार सुनाउँदै भने–‘ छोरी त्यसै दिन यता माइती आउने , अर्कोदिन कार्तिक २१ गते छिमेकका सबै आफन्तहरुलाई भेटघाट गर्ने र २२ गते बिहानै मनकामना दर्शन गरेर काठमाण्डौं जानका लागि मैले स्करपियो गाडी बुकिङ्ग गरि सकेको थिएँ । अर्को दिन २३ गते दिउँसो त्यहाँ किनमेल गरेर साँझ साढे ८ बजेको फ्लाइटमा उड्ने गरि टिकट लिई सकेका थियौं।’ कतार एअरलाइन्सको टिकट लिइएको उनले बताए।
बाग्लुङ्गको निसीखोला गाउँपालिका–४ झिवाँखोला बजारमा पुख्र्याैली घर भएका रेग्मी परिवारका दुई छोरा , दुई छोरी मध्ये अनिता जेठी छोरी थिइन्। स्टाफ नर्स पढेकी उनी विवाह अघिसम्म मणिग्रामको क्रिमशन अस्पतालमा जागिरे थिइन् । डिभी परेर अमेरिका पुगेका उनका श्रीमान सुमन खनालसँग २०७५ साल माघ ४ गते विवाह भएको थियो ।
विवाह गरेर अमेरिका हिँडेका उनी त्यसको एक वर्षपछि घर आई करिब दुई महिना बसेर अमेरिका फर्किएका थिए । छोरीको हत्या नै भएको दावी बाबु रेग्मीको छ । आइतबार दिउँसो –‘ छोरी/बुहारी मार्न पाइँदैन…,हत्यारालाई सजाय दे , अनितालाई न्याय दे…’जस्ता नारावाजी गरेर ढवाहचोक पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जाम गर्दै विरोध प्रदर्शन गरे। उनीहरुले सञ्चार माध्यमले आवाज उठाई दिन आग्रह समेत गरे। उनीहरुले हत्या भनेपछि प्रहरीले आत्माहत्या दुरुत्साहन मुद्दामा प्रहरीले अनिताकी सासु शान्त खनाल र देवर मदन खनाललाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले जनाएको छ ।
बुटवलकी अनिताको न्यायको माग गर्दै पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध